ဒုတိယကမ္ဘာစစ်က ပင်လယ်ထဲ ရက်ပေါင်း 133 ရက်ကြာမြောခဲ့ပြီး အသက်ရှင်ခဲ့တဲ့ တရုတ်နိုင်ငံသား – CantWait2Say
ဒုတိယကမ္ဘာစစ်က ပင်လယ်ထဲ ရက်ပေါင်း 133 ရက်ကြာမြောခဲ့ပြီး အသက်ရှင်ခဲ့တဲ့ တရုတ်နိုင်ငံသား
ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်းမှာ တရုတ်ကနေ ဗြိတိသျှကို သွားတဲ့ သင်္ဘောမှောက်ပြီး Poon Lim ဆိုတဲ့ တရုတ်နိုင်ငံသားတစ်ယောက်သာ အသက်ရှင် ကျန်ရစ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။သူအပါအဝင် သင်္ဘောမှာ လူ 52 ယောက်ပါရှိပြီး Cape Town ကနေ Surinam ကို သွားတာဖြစ်ပါတယ်။အမေဇုံရဲ့ မိုင်ပေါင်း 750 ခရီးကို ဖြတ်သန်းသွားစရတာဖြစ်ပါတယ်။သင်္ဘောဟာ ဗုံးဒဏ်သင့်ပြီး ပျက်စီးခဲ့ရာကနေ ပင်လယ်ထဲ တစစီဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်။
Poon Lim ဟာ က့ကောင်းစွာ အသက်ရှင်ခဲ့ပြီး အပျက်အစီးတွေကြားက ကောင်းနိုးရာရာတွေစုပြီး သူဟာ ဖောင်ပုံစံလုပ်ပြီး နေထိုင်ခဲ့ပါတယ်။အမြဲတမ်းအတွက် ဒါဟာ မလွယ်ကူခဲ့ပါဘူး။သူဟာ ဆယ်ရယ်အကျော်မှာ အစားအစာ ပြတ်လပ်ပြီး စိတ်ဓာတ်အကြီးအကျယ်ကျလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမယ့် သူဟာ ဂျပန်တွေ စစ်ရှုံးရင် သူဟာ ပင်လယ်ပြင်မှာ သေသွားလည်း ဂရုမစိုက်တော့ဘူးလို့ ပြောပါတယ်။အကြောင်းကတော့ တရုတ်ပြည်မှာ ကျန်ခဲ့တဲ့ မိဘတွေကို စစ်ဘေးသင့် ပြည်သူဖြစ်မှာ စိုးရိမ်တဲ့အတွက် သူဟာ အသက်ရှင်ဖို့ လိုအပ်တယ်လို့ တွေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
သူဟာ ပင်လယ်ရဲ့ မုန်တိုင်းကို အမြဲကြောက်လန့်ခဲ့ရပြီး မနက်ဖြန်မှာ ကယ်ဆယ်ရေး ဒါမှမဟုတ် သင်္ဘောတစ်စီးလာပါစေလို့တောင် ဆုတောင်းဖို့ မေ့ခဲ့ပြီး မုန်တိုင်းမလာပါစေနဲ့လို့သာ ဆုတောင်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
သူဟာ ရက်ပေါင်း 133 တိတိ ပင်လယ်ထဲ နေခဲ့ရပြီး သမိုင်းမှာ ရက်အကြာဆုံး ပင်လယ်ထဲ ဖောင်နဲ့ သေဘေးက လွတ်မြောက်ခဲ့သူအဖြစ် ဂရင်းနစ်ဝင်ခဲ့ပါတယ်။သူအတွက် ရက် 20 လောက်မှာ ခက်ခဲပင်ပမ်းလွန်းလာပြီး အစားအစာနဲ့ ရေအတွက် သူဟာ သွေးဖောက်ချပြီး ငါးမန်းကို မျှားခဲ့ရပါတယ်။သာမာန်ငါးလေးတွေကို သူဖမ်းဖို့ဆိုတာ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ရေသတ္တဝါတွေဟာ ရေထဲမှာ လျင်မြန်တဲ့ ကူးခတ်မှုကြောင့် သူ့အေနနဲ့ ရေနစ်သေသွားနိုင်ပါတယ်။ပအကျိုးထူးမှာ မဟုတ်တဲ့ ကြီးမားတဲ့ ငါးမန်းကို ဖမ်းဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။
ကံကောင်းစွာနဲ့ သူ့ဆီရောက်ခဲ့တဲ့ ငါးမန်းက အကောင်အရမ်းမကြီးပဲ ပြင်းပြင်းထန်ထန် တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။သူဟာ ငါးမန်းကို အနိုင်ယူပြီးတဲ့ အချိန်မှာတော့ သွေးတွေကို သောက်စရာလုပ်ဖို့ ထုတ်ခြ့ပြီး အသားတွေကို နေလှန်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဟာ သူ့အတွက် အသက်ဆက်စေခဲ့တဲ့ ပင်မအောကာင်းအရင်းဖြစ်ခဲ့ပြီး သူဟာ သွေးကို အာဆွတ်ရုံသာ သော်ကခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ရက်ပေါင်း 133 ဟာ သုံးလကျော်ဖြစ်ပြီး သူဟာ အစစအရာရာကို ချွေတာခဲ့ရပြီး အသားကိုလဲ တဖတ်လောက်သာ စားပြီး နောက်နေ့တွေ အတွက်ချန်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။သူ ဘယ်နှစ်ရက်ကြာမယ်ဆိုတာ သူမသိလို့ ဖြစ်ပါတယ်။
ရက်ပေါင်း 130 အကြာမှာ သူလဲသွားပါပြီ။ဘာဆိုဘာမှ မရှိတော့်ပဲ သူမှာ ရှိတဲ့ ခွန်အားနည်းနည်းလေးက မကြာခင် သေတော့မယ်ဆိုတဲ့ အရိပ်လက္ခဏာပြခဲ့ပါတယ်။သူ မြောနေခဲ့ပြီး ရက်ပေါင်း 133 မှာ မနက်ပိုင်း သူပြန်နိုးခဲ့ပါတယ်။တနေလုံး အိပ်မက်လို တကယ်လိုဖြစ်နေပြီး လူသုံးယောက်က လာခေါ်တာ ကြုံလိုက်ရပါတယ်။နောက်တော့ မျက်လုံးဖွင့်ကြည့်တော့ ဆေးရုံကို ရောက်နေပြီ လူလဲ နည်းနည်းလန်းဆန်းကာ နေပါတယ်။သူ့ကို ကယ်ခဲ့သူတွေဟာ ဘရာဇီးငါးဖမ်းသမား သုံးယောက်ဖြစ်ပြီး သူဟာ ဆေးရုံမှာ5ပတ်တိတိ နေခဲ့ပြီး တ၇ုတ်ပြည်ကို ပြန်ပို့ပေးခဲ့ကြပါတယ်။
ဒုတိယကမ်ဘာစဈက ပငျလယျထဲ ရကျပေါငျး 133 ရကျကွာမွောခဲ့ပွီး အသကျရှငျခဲ့တဲ့ တရုတျနိုငျငံသား
ဒုတိယကမ်ဘာစဈအတှငျးမှာ တရုတျကနေ ဗွိတိသြှကို သှားတဲ့ သင်ျဘောမှောကျပွီး Poon Lim ဆိုတဲ့ တရုတျနိုငျငံသားတဈယောကျသာ အသကျရှငျ ကနျြရဈခဲ့တာဖွဈပါတယျ။သူအပါအဝငျ သင်ျဘောမှာ လူ 52 ယောကျပါရှိပွီး Cape Town ကနေ Surinam ကို သှားတာဖွဈပါတယျ။အမဇေုံရဲ့ မိုငျပေါငျး 750 ခရီးကို ဖွတျသနျးသှားစရတာဖွဈပါတယျ။သင်ျဘောဟာ ဗုံးဒဏျသငျ့ပွီး ပကျြစီးခဲ့ရာကနေ ပငျလယျထဲ တစစီဖွဈသှားခဲ့ပါတယျ။
Poon Lim ဟာ က့ကောငျးစှာ အသကျရှငျခဲ့ပွီး အပကျြအစီးတှကွေားက ကောငျးနိုးရာရာတှစေုပွီး သူဟာ ဖောငျပုံစံလုပျပွီး နထေိုငျခဲ့ပါတယျ။အမွဲတမျးအတှကျ ဒါဟာ မလှယျကူခဲ့ပါဘူး။သူဟာ ဆယျရယျအကြျောမှာ အစားအစာ ပွတျလပျပွီး စိတျဓာတျအကွီးအကယျြကလြာတာဖွဈပါတယျ။ဒါပမေယျ့ သူဟာ ဂပြနျတှေ စဈရှုံးရငျ သူဟာ ပငျလယျပွငျမှာ သသှေားလညျး ဂရုမစိုကျတော့ဘူးလို့ ပွောပါတယျ။အကွောငျးကတော့ တရုတျပွညျမှာ ကနျြခဲ့တဲ့ မိဘတှကေို စဈဘေးသငျ့ ပွညျသူဖွဈမှာ စိုးရိမျတဲ့အတှကျ သူဟာ အသကျရှငျဖို့ လိုအပျတယျလို့ တှေးခဲ့တာဖွဈပါတယျ။
သူဟာ ပငျလယျရဲ့ မုနျတိုငျးကို အမွဲကွောကျလနျ့ခဲ့ရပွီး မနကျဖွနျမှာ ကယျဆယျရေး ဒါမှမဟုတျ သင်ျဘောတဈစီးလာပါစလေို့တောငျ ဆုတောငျးဖို့ မခေဲ့ပွီး မုနျတိုငျးမလာပါစနေဲ့လို့သာ ဆုတောငျးခဲ့တာဖွဈပါတယျ။
သူဟာ ရကျပေါငျး 133 တိတိ ပငျလယျထဲ နခေဲ့ရပွီး သမိုငျးမှာ ရကျအကွာဆုံး ပငျလယျထဲ ဖောငျနဲ့ သဘေေးက လှတျမွောကျခဲ့သူအဖွဈ ဂရငျးနဈဝငျခဲ့ပါတယျ။သူအတှကျ ရကျ 20 လောကျမှာ ခကျခဲပငျပမျးလှနျးလာပွီး အစားအစာနဲ့ ရအေတှကျ သူဟာ သှေးဖောကျခပြွီး ငါးမနျးကို မြှားခဲ့ရပါတယျ။သာမာနျငါးလေးတှကေို သူဖမျးဖို့ဆိုတာ မဖွဈနိုငျပါဘူး။ရသေတ်တဝါတှဟော ရထေဲမှာ လငျြမွနျတဲ့ ကူးခတျမှုကွောငျ့ သူ့အနေနဲ့ ရနေဈသသှေားနိုငျပါတယျ။ပအကြိုးထူးမှာ မဟုတျတဲ့ ကွီးမားတဲ့ ငါးမနျးကို ဖမျးဖို့ ဆုံးဖွတျလိုကျတာဖွဈပါတယျ။
ကံကောငျးစှာနဲ့ သူ့ဆီရောကျခဲ့တဲ့ ငါးမနျးက အကောငျအရမျးမကွီးပဲ ပွငျးပွငျးထနျထနျ တိုကျခိုကျခဲ့ကွတာဖွဈပါတယျ။သူဟာ ငါးမနျးကို အနိုငျယူပွီးတဲ့ အခြိနျမှာတော့ သှေးတှကေို သောကျစရာလုပျဖို့ ထုတျခွ့ပွီး အသားတှကေို နလှေနျးခဲ့တာဖွဈပါတယျ။ဒါဟာ သူ့အတှကျ အသကျဆကျစခေဲ့တဲ့ ပငျမအောကာငျးအရငျးဖွဈခဲ့ပွီး သူဟာ သှေးကို အာဆှတျရုံသာ သျောကခဲ့ရတာဖွဈပါတယျ။ရကျပေါငျး 133 ဟာ သုံးလကြျောဖွဈပွီး သူဟာ အစစအရာရာကို ခြှတောခဲ့ရပွီး အသားကိုလဲ တဖတျလောကျသာ စားပွီး နောကျနတှေ့ေ အတှကျခနျြခဲ့ရတာဖွဈပါတယျ။သူ ဘယျနှဈရကျကွာမယျဆိုတာ သူမသိလို့ ဖွဈပါတယျ။
ရကျပေါငျး 130 အကွာမှာ သူလဲသှားပါပွီ။ဘာဆိုဘာမှ မရှိတေျာ့ပဲ သူမှာ ရှိတဲ့ ခှနျအားနညျးနညျးလေးက မကွာခငျ သတေော့မယျဆိုတဲ့ အရိပျလက်ခဏာပွခဲ့ပါတယျ။သူ မွောနခေဲ့ပွီး ရကျပေါငျး 133 မှာ မနကျပိုငျး သူပွနျနိုးခဲ့ပါတယျ။တနလေုံး အိပျမကျလို တကယျလိုဖွဈနပွေီး လူသုံးယောကျက လာချေါတာ ကွုံလိုကျရပါတယျ။နောကျတော့ မကျြလုံးဖှငျ့ကွညျ့တော့ ဆေးရုံကို ရောကျနပွေီ လူလဲ နညျးနညျးလနျးဆနျးကာ နပေါတယျ။သူ့ကို ကယျခဲ့သူတှဟော ဘရာဇီးငါးဖမျးသမား သုံးယောကျဖွဈပွီး သူဟာ ဆေးရုံမှာ5ပတျတိတိ နခေဲ့ပွီး တရုတျပွညျကို ပွနျပို့ပေးခဲ့ကွပါတယျ။
အမျိုးသမီးတွေ အရက်သောက်တာ မုဒိန်းကျင့်ခံရတာတို့နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကာတာနိုင်ငံရဲ့ ဥပဒေ
အမျိုးသမီးတွေ အရက်သောက်တာ မုဒိန်းကျင့်ခံရတာတို့နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကာတာနိုင်ငံရဲ့ ဥပဒေ အနောက်တိုင်းက အမျိုးသမီးတွေဟာ ကာတာကိုသွားလည်ဖို့ဆို စဉ်းစားကြပါလိမ့်မယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ သောက်စားမူးယစ်ခွင့်မရှိတာနဲ့ ညပိုင်းပျော်ပွဲရွှင်ပွဲတွေမရှိတာကြောင့်ပါပဲ။ပြီးတော့ လက်မထပ်ပဲ အတူနေခွင့်မရှိသလို ကိုယ်တည်းတဲ့ ဟော်တယ်က လက်မထပ်ပဲ အတူနေတာလို့ သတင်းပေးလို့ ဖမ်းမိရင်အမျိုးသားရော အမျိုးသမီးရော ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံရပါတယ်။တခါက ဒတ်ခ်ျအမျိုးသမီးဟာ အဲ့လိုနေမိလို့ ဒဏ်ငွေ …
သီးခြားကမ္ဘာတစ်ခုလို့ကိုထင်ရတဲ့ဒူဘိုင်းရဲ့ မယုံနိုင်စရာကောင်းတဲ့ ချမ်းသာကြွယ်ဝမှုများအကြောင်းဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ ။ 1.ရွှေနဲ့လုပ်ထားတဲ့ Playstationပါ။ 2.ရွှေရောင်အမြုပ်ထနေတဲ့ cappuccinoတစ်ခွက်က ပိုသောက်လို့ကောင်းတာလား? 3.ကျားသစ်လေးဆိုတာ အပြင်သွားရင် ကားထဲထည့်ခေါ်သွားလို့ရတဲ့တိရစ္ဆာန် 4.နောက် ဒူဘိုင်းမှာ ကျားဆိုတာ အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်ပါပဲ။ 5.အခြားအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်တွေလိုပဲ သခင်ဆီက ဂရုစိုက်မှုကိုလိုချင်နေတဲ့ ခြင်္သေ့ပါ။ 6.ဆိုင်တံခါးဝက အလေးချိန်ပေါင်350ရှိတဲ့တံတားလေးပါ။ဘဘောက်တောင်မိုက်တဲ့ ပြင်ဆင်မှုလဲ? 7.Taxiငှားချင်လား? ဝန်ဆောင်မှုကတော့ …